Mpanamboatra sy mpamatsy China STEVIOSIN | HEX
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), fantatra ihany koa amin'ny hoe Stevioside, dia glycoside nalaina avy tamin'ny ravina Stevia Rebaudia (Stevia), fianakavian'ny zavamaniry ao amin'ny fianakaviana mitambatra.
Ny sandan'ny stevia siramamy Stevia dia 1/300 fotsiny amin'ny sukrosa, tsy voatsindrona aorian'ny fisotroana vatan'olombelona, ​​tsy mamokatra hafanana, mety ho an'ny diabeta sy ireo marary matavy loatra. Rehefa mifangaro amin'ny sucrose fructose na siramamy isomerika i Stevia dia azo hatsaraina ny mamy sy ny tsirony. Azo ampiasaina amin'ny vatomamy, mofomamy, zava-pisotro, zava-pisotro mahery, tsakitsaky nendasina, zava-manitra, voankazo misy vatomamy. Ampiasao amin'ny antonony araka ny filan'ny famokarana. Aza variana aorian'ny fisakafoanana, aza mamokatra angovo hafanana, noho izany, ho an'ny diabeta, ireo marary matavy loatra dia mamy mamy voajanahary.
Amin'ny maha-zava-dehibe ny Stevia rebaudiana, ny steviol glycosides dia manan-karena ara-pahasalamana sy azo hanina, ary ny fiarovana azy ireo koa dia nosedraina sy voamarin'ny fikambanana matihanina iraisam-pirenena.
Ny fiarovana azo antoka amin'ny steviol glycosides dia nandalo fikarohana henjana momba ny fanadihadiana nataon'ny mpiara-miasa. Ny fikambanana mifehy iraisam-pirenena rehetra dia mihevitra ny stevia ho vokatra sakafo azo antoka. Ireto fikambanana ireto dia misy: Komity kaody momba ny sakafo (CAC), Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena / ny komity manerantany momba ny fahasalamana (JECFA), ny maso misahana ny fiarovana ara-tsakafo eropeana (EFSA), ny fitantanan-draharaha amerikana sy ny fitantanana zava-mahadomelina (FDA) ary ny Nouvelle Zélande Birao fitantanana ny fenitra ara-tsakafo (FSANZ).
Stevia dia zava-mamy fantatry ny ankamaroan'ny olona. Izy io koa dia ahitra maharitra tsy manam-paharoa eo amin'ny sisintany manelanelana an'i Paraguay sy Brezila any Amerika atsimo. Ny ravin'ny stevia dia misy zava-mamy antsoina hoe "Stevia". Ny stevia voadio dia kristaly tsy misy loko sy tsy misy tsirony. Manana mamy tokony ho 300 heny noho ny siramamy. Noho ny kaloria ambany, mora levona anaty rano na toaka, ary mahazaka hafanana ihany koa, dia azo faritana ho toy ny vokatra mpisolo siramamy tsy misy kaloria ary zava-mamy ampiasaina matetika amin'ny sakafo diabeta na sakafo mampihena. Stevia dia antsoina hoe "Kahei" (Gulani, midika hoe "ahitra mamy") any Paraguay, ary ampiasaina hanampiana mamy ho an'ny vady yerba.
Previous: Vovon-tsitroka White Willow
Manaraka: Vovon-tsitroka Gibereng Siberia
Rhodiola Rosea mamoaka vovoka